Chii chinonzi compostable zvinhu?
ne admin pane 20-12-19
Kuodza kwakadzika kunogumira kweiyo biodegradation, kudomwa kwenzvimbo diki diki, nguva yekudzikisira, chiyero uye kukanganisa kune zvakatipoteredza. European Union ine dudziro yeichi, icho chinotsanangurwa se "zvinhu zvinogumbuka". Zvinoenderana neEN13432, co ...
Chii chinonzi Biodegradable zvinhu
Tsanangudzo ye bioplastics: kana mapurasitiki ari bio based, iwo anotsanangurwa se bioplastics, biodegradable, kana ese ari maviri. Bio base inoreva kuti icho chigadzirwa (chikamu) chinobva ku biomass (chirimwa). Bioplastics inobva muchibage, nzimbe kana cellulose. Iyo biodegradation ye bioplastics inoenderana nekemikari struc yayo ...
Chaiwo kushandiswa kwe polylactic acid bioplastics
Chaiwo kushandiswa kwe polylactic acid bioplastics PLA pachayo ndeye aliphatic polyester, iyo ine hunhu hunokosha hweyakajairika polymer zvinhu, yakanaka mehendi kugadzirisa mashandiro uye yakaderera shrinkage. Inogona kushandiswa kune mazhinji epurasitiki yekugadzira. Vakawanda kushandiswa kugadzira pa ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pekudzikisira, kuora uye kuora?
Bio yakavakirwa mapurasitiki uye mapurasitiki anogadzirwa nemafuta anogadziriswa zvakatipoteredza uye anogadzikana anotsiva echinyakare mapurasitiki ayo anonyanya kugadzirwa peturu. "Zvinodzikadzika", "biodegradable" uye "compostable" aya mazwi anowanzo kutaurwa nevanhu pavanenge vachitaura ...
Biodegradable Inotambanudza Firimu, Biodegradable Cling Kuputira, Compostable Bags, Compostable Garbage Bags, Biodegradable Compostable Marara Mabhegi, Eco Cling Kuputira Shuga Kuputira,